Habka ay u gudbiyaan Data ka Sony in Samsung
Sidee Si aad ka Sony wareejinta xogta si Samsung
Samsung ayaa koray si ay u noqon brand ugu caansan ee casriga ah. Hadda, waxa ay leedahay saamiyada ugu badan ee iibka mobile. Taleefannadooda lagu yaqaan ay design, isku haleynta, waxqabadka, iyo qiimaha gadista. Haddii aad bedelay phone jir Sony la Samsung phone cusub ee aad rabto in aad xogta ka soo telefoonka jir wareejiyo. Inkastoo labada telefoonada isticmaali Androids, wareejinta xogta ay noqon kartaa adag. Waxaad la kulmi doonaa arrimo kala duwan.
Arrimaha ku saabsan xogta ka Sony wareejinta in Samsung
Maxay yihiin arrimaha caadi ah in cudurka daacuunka isticmaala marka wareejinta macluumaadka u dhexeeya labadan qalabka? Halkan waxa aad ku arki dhammaan arrimaha guud in aad karaa ama ma ogaan karaan.
1. macluumaadka waxaa ka mid ah xiriirada, fariimaha, audio, sawirada, video, abuse call iyo barnaamijyadooda. Xogtan waxaa la heli by codsiyada kala duwan. Kala beddelashada nooca xogta walba waa ay adag tahay haddii a software xisbiga saddexaad waxaa loo isticmaalaa.
2. Waa in aad si gaar ah u gudbiyaan xogta kasta oo ka mid ba midka kale.
3. Waxay u baahan tahay fahamka qaab xog kasta xiriiro sida ku yimaado vCards iyo fariin ay .txt qaabab.
4. Kala beddelashada xogta mar waa waqti. Tusaale ahaan, xiriirada wareejinta u baahan doonaa qadarka wayn waqti haddii aadan ogaan in aadan sida ay u gudbiyaan xiriir qaab vCard.
5. Waxaad sidoo kale keeni karta in aad telefoon, haddii files xogta ay ka mid yihiin furin wareejiyo.
Waxaa jira arrimo kale oo badan, kaas oo aad la kulmi doontaa, halka xogta ka Sony in Samsung phone wareejinta. Laakiin wax wanaagsan ay tahay waxa jira xal loo helo dhow dahay.
Xal Easy: 1 click in xogta ka Sony wareejiyo Samsung
Waxaa jira hab kale oo sahlan si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya labadan qalabka. Inta aad u baahan doontaa inaad ku bixisaan, wax yar, waxaa jira waxyaabo badan oo aad ka heli kartaa. Iyadoo software sida Wondershare MobileTrans, wax walba waa u fududahay.
MobileTrans Waa mid ka mid click xogta mobile software kala iibsiga, taasoo ku wareejinaya xogta ka mid phone in kale mid ka mid click. Kala iibsiga Phone files xogta sida xiriirada, fariimaha qoraalka ah, audio, video, jadwalka, barnaamijyadooda, abuse call iyo sawiro. Wax walba qaadataa daqiiqado yar inay hawsha. Habkani waa mid gebi ahaanba halis lacag la'aan ah iyo boqolkiiba boqol nabad ah. Faa'iidada weyn waxaa ka mid ah waa in ay qaban karaan wareejinta xogta u dhexeeya nidaamka qalliinka kasta.
1. Software waa la jaan qaada macruufka, Android iyo Nokia Symbian. Waxa ay taageertaa badan 3000 lagu daydo ee casriga ah iyo shabakadaha kala duwan.
2. Waxa kale oo ay kor u taageeray content iyo telefoonada dadka u soo celiyaa tayada asalka ah.
3. Waxaa kasoo muuqan in ay masixi xog dhamaystiran ka telefoonka. Tani waa hadii aad rabto in aad iibiso telefoonka jir ah oo waxtar leh.
4. interface waa mid aad u fudud oo qaataa dhowr daqiiqo si ay u sameeyaan kala iibsiga.
Talaabooyinka in xogta ka Sony wareejiyo phone Samsung oo isticmaalaya Mobile Trans
Iyadoo Wondershare MobileTransfer, habka oo dhan wareejinta xogta adag noqdo fudud. Download software ka Wondershare website-ka. Version Trial waa la heli karaa iyadoo feature xadidan, laakiin lacag la'aan ah oo ah qiimaha halka buuxa featured version baahan yahay in la iibsaday. Hubi in aad u tagto iyada oo buugga software ka hor u isticmaalaya sida ay u la helaan doonaa xogta mobile aad u muhiim ah. Ka hor inta aanad bilaabin la talaabooyinka, halkan waa shuruudda habkan:
c. Fiilooyinka USB labada telefoonada
Burcad software ku saabsan Windows ama Mac pc. Software labada OS waa la heli karaa. Hadda dooro ikhtiyaarka buluug midab, taas oo Phone inay kala iibsiga Phone ..
Next, waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan labadaba telefoonada via cable USB. Isticmaal cable ee telefoonada kala sidii ay siin telefoonada ee isku xirnaanta ugu fiican. Sug Software ah in la ogaado labada telefoonka.
Hadda mar la ogaado, hubi in isha waa telefoonka Sony iyo meel loo ahaadana iyadaa yahay Samsung phone cusub. Laga soo bilaabo guddi dhexe, dooro noocyada macluumaadka aad rabto in lagu wareejiyo si aad Samsung ah. Lambarada waxa laga tilmaami doonaa sokow kasta noocyada xogta muujinaya tirada xiriirada, fariimaha, sawiro ama kuwa kale loo wareejin doonaa.
Hadda mar aad hubto oo ku saabsan macluumaadka aad rabto in aad wareejiso kaliya guji Copy Start. The sanduuqa hadal Next muuqataa oo ay bilawdo habka kaliya. Daaqad cusub muujin doontaa horumarka kala iibsiga. Waqtiga qaaday iibsiga waxay ku xidhan tahay baaxadda xogta.
Waa kuwee Samsung telefoonada waxaa loo isticmaalaa Maraykanka ee?
Samsung waa brand caan ah oo aduunka oo dhan. Ka dib markii tufaax, waa brand ugu caansan casriga ah loo isticmaalo ee USA. Samsung sii daayo noocyada kala duwan ee telefoonada ee suuqa dhowr bilood kasta. Halkan waxa ku jira 10 aaladaha Samsung ugu sareysa ee hadda loo isticmaalo in USA:
1. Samsung Galaxy qod6
Edge 3. Samsung Galaxy qod6
Fiiro 6. Samsung Galaxy 3
The Galaxy qod6 Edge waa mid ka mid ah telefoonada ugu fiican iyo qod6 iyo qod6 Edge iibin karaan sida ugu badan ee 70 m telefoonada ee sanadkan. Iyada oo kaamirooyinka weyn, kor u xoog processing iyo sifooyinka gaarka ah ee Samsung, wax badan waa suurto gal. The telefoonada kor ku xusan waa telefoonada sare Samsung hadda la heli karo Mareykanka ee. Telefoonada Kuwan waxaa loo yaqaan for design ay, waxqabadka, iyo isku halaynta. Telefoonada Samsung ayaa sidoo kale ka iibin qiimaha ugu wanaagsan ka mid ah casriga ah. Haddii aad raadinayso si ay u iibsadaan cusub Samsung, tixgelin eegaya liiskan fursado.
Top 10 Players Samsung Music
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Samsung in Android Qalabka Kale
> Resource > Android > Sida loo ka Sony wareejinta xogta si Samsung